If you cant see the post properly, try to used with Mozillz Firefox. I still havingafont problem ... I am still working on it ...Category :
posted by CyberCLAY # 6:28 PM3comments
I would like to apologized to Ko Nyi Lynn Seck , Myo Chan Htun, Ko Mg Yoe for not taking permisson for adding link of your site on my page.Ko Myo Chan : Your site is really good. I really like your site. It is clean and cool.Category : Personal
posted by CyberCLAY # 8:22 AM3comments
I am still facingaproblem with mm font. My font cant display when I view my blog in IE. But it is almost fine in Firefox. If you guys know my error, please drop your suggestion at haterclay@gmail.comI am welcome to all of you guys for your suggestion. Thank for visitingCategory : Computer
posted by CyberCLAY # 8:15 AM2comments
ဟိုနေ့ တုံးကလည်း CyberCafe က နေ ကျွန်တော့် blogger ၀င်ကြည့်လိုက်တယ် ။ Error တက်နေတယ် ။ AJAX ကို ဘမ်းထားတယ် ။ ဒါပေမဲ့ အိမ်ကနေ၀င် ကြည့်တော့ အကောင်းဘဲ ။ ဘယ်လို နားလည်ပေးရ မလဲတောင် မသိဘူး ။Category : Personal
posted by CyberCLAY # 5:19 AM0comments
ကျွန်တော်သည်အရင်တုံးက အတိတ်အကြောင်းတွေကို စဉ်းစားလိုက်တိုင်း မျက်ရည်ဖြင့်သာ ဖြေသိမ့်ခဲ့၇သည်။ မွေးကတည်းက အခင်ဆုံးသူငယ်ချင်း ဟူသည်မရှိပေ။အတိတ်တုံးက အကြောင်းတွေကိုစဉ်းစားမိတိုင်း ၀မ်းနည်း ကြေကွဲမိတယ်။ ယုံကြည်ချက် အနည်းခံရသော ကျွန်တော်ရဲ့ ခံစားချက်တွေ အတွက်လည်း ရင်နာမိတယ်။ ကိုယ်လုပ်မိခဲ့သောအကြောင်း တွေအတွက်လည်း နောင်တတော့မရမိပါဘူး။ အချိန်တွေကုန်ခဲ့ပြီလေ၊ ဘ၀အသစ်မှာ ခံစားချက် အသစ်တွေနှင့်လည်း အသက်ဆက်လက် ရှင်သန်လျက်ရှိနေပြီ။ ဒါပေမဲ့လည်း အတိတ်အတွက် ခံစားချက်တွေကတော့ မပြောင်းလဲသေးပါဘူး။ ဒါပေမဲ့ အရင်တုံးက မျက်ရည်ဖြင့်ပြေသိမ့် ခဲ့ရသော နေရာမှာတော့ သီချင်းလေးဖြင့် ပြောင်းလဲပြေသိမ့်ခဲ့ရသည်။ သီချင်းစာသားလေးနဲ. ခေါင်းစဉ်လေးက ကျွန်တော်ရဲ့ဘ၀လေးနှင့် တော်တော်လေး အံကိုက်ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီ သီချင်းလေး ကိုတော့ ကြားဖူးရင်ကြားဖူးမှာပါ။ မကြားဖူးသေး ရင်တော့ နားထောင်ကြည့်လိုက်ပါ။ သီချင်းလေး အမည်ကတော့ (၀ိုင်းဝိုင်း) နှင့် (ကြိုးကြာ) သီဆိုထားသော (မဆုံတဲ့ဖူးစာ) ဖြစ်ပါတယ်။အတိတ်ကအကြောင်းကို သိသူတိုင်းကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက် လေးတွေကို နားလည်ခံစားပေး နိုင်ကြပါစေ။Category :Sorrow
posted by CyberCLAY # 4:42 AM0comments
I really proud of myself. I really dont know that I can achieve it. I have to do more on it. Thank to ko nyilynnseck for giving me an idea to haveablog or wordpress.
posted by CyberCLAY # 11:19 AM0comments
IT is nothing about justaplace where I can do what I want to do ....
posted by CyberCLAY # 8:17 PM0comments